Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- अरूले किसनलाई भातृ संगठन बनाए, हामीले मातृ संस्था मानेका छौं : महासचिव मिश्र
ईश्वरदयाल मिश्र, महासचिव, जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपाल
० हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा जनता प्रगतिशील पार्टीको पक्षमा देखिएको परिणामलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
— हामी यसलाई सन्तोषजनक रूपमा नै लिएका छौँ । केन्द्रीय कार्य समितिको समीक्षामा निर्वाचन परिणामलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । पार्टी अलि अगाडि नै गठन भएको भए हामीले राम्रो नजिता ल्याउन सक्थ्यौँ । यो कुरा सबै तिरबाट आयो । यही कुरा वास्तविक पनि हो । अहिले जुन परिणाम आएको छ, त्यो सन्तोषजनक नै छ ।
० तपाईँहरूको छुट्टै समूह थियो । तर, पनि समयमै पार्टी बनाउनु भएन । ढिलो गरी अर्थात् करिब ४ वर्ष किन लाग्यो पार्टी बनाउन ?
— पार्टी गठनका लागि बीच बीचमा दुई/चार पटक बैठक पनि भयो । स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको बैठकहरू भयो । हामीले एमालेमा विलय हुने कि अलगै पार्टी बनाएर जाने विषयमा छलफल भएको थियो । यही विषयको समीक्षा गर्दा गर्दै ढिलो भयो । साथीहरूको सल्लाह के रह्यो भने हाम्रो अलगै पहिचान हुनुपर्छ । हाम्रो पहिचान समाप्त हुनु हुँदैन । हामी पार्टी बनाएर नै अगाडि जानुपर्छ । सबै साथीको त्यही सल्लाह भयो । हो, अलि ढिलो भयो । पाँच–सात महिना अगाडि पार्टी गठन भइदिएको भए आज अर्कै परिणाम आउँथ्यो । स्थानीय चुनावमा कुनै नेता प्रतीक्षा गर्ने कुरा हुँदैन । कहीँ न कहीँ उनीहरूले आफ्नो ठाउँ बनाइसकेको हुन्छ । किन भने ट्रेन छुट्यो भने छुट्यो । एक पटक हामीले बहिष्कार गरेको पनि अवस्था थियो । त्यही भएर साथीहरू आत्तिएर यताउता पनि लागे । तर, उहाँहरूले भन्दै आएका थिए भने हामी जहाँ गए पनि हाम्रो विचारधारा तपाईँहरूसित नै मिलिरहेको छ । चुनाव हार जित जे भए पनि जनता प्रगतिशीलमा आउने भनेर उहाँहरूले भन्दै आएका थिए । सबैको भावना त्यही हो । त्यसकारण धेरै जना यताउता गएर चुनाव लडे । हामीले धेरै राम्रो प्रदर्शन त गर्न सकेनौँ । तर, सन्तोषजनक स्थिति बन्यो । चुनावमा पार्टीको खाता पनि खोलियो । कोदालो बोकेका किसानको प्रचारप्रसार पूरै देशमा गरियो । करिब १७ जिल्लामा हाम्रो पार्टी दर्ता थियो । धेरै ठाउँमा हाम्रा उम्मेदवारहरू लडे । पक्कै पनि सबै ठाउँमा जितेनन् । किन भने हडबडमा गडबड त हुन्छ । कोदालो छाप स्थापित भइसकेको छ । आउने दिनमा कोदालो छापले कमाल गर्ने छ ।
० तर, धेरै नेताले तपाईँहरूको साथ छोडेर गएका छन् । उनीहरूलाई पार्टीमा फर्काउन सक्नुहुन्छ ?
— राजनीति रेल र बस जस्तो हुन्छ । गन्तव्यमा पुग्ने बेलामा चार जना बसबाट झर्छन् भने दुई जना चढ्छन् । यो त राजनीतिको नियमै हो । यो आज देखिएको होइन । वर्षौदेखि चलिआएको रीति हो । को आयो को गयो त्यो आफ्नो ठाउँको कुरो हो । त्रिपाठीजी नेतृत्वको पार्टीलाई हेर्ने नजरिया राम्रो छ । त्रिपाठीजीको व्यक्तित्वबाट तराई, हिमाल र पहाडका सबैतिरका जनता प्रभावित छन् । उहाँसँग काम गर्ने इच्छुकहरू धेरै छन् । हो, केही बाध्यात्मक स्थितिका कारण पार्टीमा आउन नसकेका होलान् त कोही आउन खोजेर पनि अहिलेसम्म आउन नसकेका होलान् । यो विस्तारै विस्तारै सबै ठिक हुँदै जान्छन् । आउने निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा पहिरो जाने बाला छ । धेरै पार्टीमा पहिरो जान्छ । अहिले भएका पार्टीबाट सबैको पीडा छ । निश्चित रूपम हरेक पार्टीमा पहिरो जान्छ । हामीले त्यो पहिरो ल्याउन खोजेको होइन । तर, त्यो पार्टीको आफ्नो कारणले पहिरो आउँछ । त्यो पहिरो आउने एउटा कारण के हो भने हृदयेश त्रिपाठीलाई मन्त्रीको खाँचो छैन । हरेक मन्त्रालय उहाँले पाइसक्नुभएको छ । उहाँलाई मन्त्री बन्ने रहर छैन । कुनै कलंक नभएको नेतामा उहाँको गणना गरिन्छ । आफ्नो कुरा प्रभावकारी तरिकाले राख्ने पनि उहाँको कला हो । त्यसकारण मान्छेहरू उहाँसँग आकर्षित छन् । त्यसको फाइदा पार्टीलाई हुन्छ ।
० प्रदेश र संघीय चुनावअघि तपाईँहरूको पार्टीले संगठन विस्तारका कार्य पूरा गरी पूर्णता पाउँछ ?
— हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक १०–१२ दिन अघि थियो । स्थानीय निकायको समीक्षा र पार्टी संगठनको विषयमा वृहत् छलफल भएका थियो । यो असारको १ गतेदेखि १५ गतेसम्म हामीले अभियानका रूपमा वडादेखि प्रदेशसम्म संगठन निर्माण गर्ने र १५ गतेपछि साना कार्यक्रमहरू जस्तै कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने निर्णय भइसकेको छ । हामीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन पठाउने तयारीमा छौँ । त्यसैले मंसिर होइन असोजसम्म हाम्रो पार्टीले पूर्णता पाइसक्ने छ । वडासम्म पार्टी गठन भइसक्ने छ । यो पार्टी अलग विचार, सिद्धान्त र उद्देश्य लिएर गठन भएको हो । अरूले किसानलाई भ्रातृ संगठनका रूपमा मात्र हेरे । तर, हामी त्यसो गर्दैनौँ । जनता प्रगतिशील पार्टी किसानलाई मात्र संगठन मानेर काम गर्छ । किन भने अहिलेसम्म यो देशमा धेरै आन्दोलनहरू भए । किसानका नाममा पनि धेरै आन्दोलनहरू भए । तर, समस्या जहाँको त्यहीँ छ । अहिलेको स्थितिमा हेर्दा किसानलाई मल तथा विउ छैन । सिँचाइको दुरावस्था थाहै छ । कृषिमन्त्री दिल्ली गएका थिए । असारको अन्तिम साता केही मल आउँछ भनेर मैले सुनेको थिएँ । त्यसो भए किसानहरूले असारलाई कुरेर बिउ रोप्ने ? किसानले के गर्ने ? बिउ रोप्नलाई पनि डीएपी मलको आवश्यकता पर्छ । त्यो बिउलाई ठूलो बनाउन युरियाको आवश्यकता पर्छ । यो देशमा न डीएपी छ न त युरिया छ । यस्तो स्थितिमा यो थप जिम्मेवारी जनता प्रगतिशील पार्टीको आइसक्यो ।
० सबैले दलले कुनै न कुनै रूपमा किसानको नाममा राजनीति गर्दै आएका छन् । यद्यपि, किसान जहिले पनि पीडामा छन् । अब तपाईँहरूले पनि किसानकै नाममा राजनीति गर्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । किन नि ?
— अहिलेसम्म विभिन्न राजनीतिक दलले किसानको सेन्टिमेन्ट लिनका लागि राजनीति गरे । सेन्टिमेन्ट बटुल्नका लागि मात्र उनीहरूले राजनीति गरे । हामीले पार्टी गठनसँगै घोषणा पत्र निकाल्यौँ । त्यो घोषणापत्र धेरैले लिएर गए । त्यही घोषणापत्रका आधारमा कसैले त्यो काम पहिले सुरू गरिदिए । तर, गरेर केही उन्नति त भएन । किनभने उसले त्यसलाई भ¥याङको रूपमा मात्र प्रयोग गरे । सस्तो लोकप्रियता लिनका लागि मात्र उनीहरूले आन्दोलन गरे । जसले गर्दा कामयाबी तर्फ गएन । हामीले पार्टी गठनसँगै किसानलाई मात्र शक्ति मानेर अगाडि बढिरहेका छौँ । यो वर्ष सदनमा किसानको मुद्दा प्रवेश गरेको छ । किन भने हामीले यसलाई बारम्बार उठाइरहेका छौँ । जनताको कानमा गुञ्जिरहेको छ । मल छैन, बिउ छैन, सिँचाइ भएन, समर्थन मूल्य छैन लगायतका कुरा गुञ्जिरहेका छन् । हाम्रो एजेण्डा यही हो । हामीले यही विषयमा कुरा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटयौँ । हामीले ज्ञापनपत्र दियौँ ।